Nanontany aho hoe: ny Lehilahy Izay Mahafeno Tsara ny Lehilahy, ary Izany Dia Inona Hoy Izy hoe: — marina Tokoa
Tsy hadinoko mihitsy ny fomba sosotra aho taloha rehefa ny tranainy indrindra rahavavy dia manosika ahy nivoaka ny varavarana eo amin’ny sabotsy alina, nangataka tamiko ny mba namely ny hidy, satria na oviana na oviana aho hihaona ny ho avy vadiny mihinana Thai sakafo ao an-trano niaraka tamin’ny vehivavy sakaizany. Azafady, hoy aho mantsy azy, tsy handeha aho mba hihaona ny lehilahy mahafinaritra iray tao amin’ny New York City fisotroana.
Tsy hihaona izaho sy ny vadiko amin’ny fisotroana, fa tsy ny eo an-toerana Thai sakafo delivery lehilahy na. Na dia eo aza ny nanizingizina fa tsy nisy, na dia indray avy eo dia fantatro tsara ry zalahy ao amin’ny tanàna izay nandeha tany amin’ny trano fisotroana mba manana zava-pisotro, ary hitsena ny vehivavy. Noho izany, ny tena fanontaniana dia: raha toa ka avy teo, ny fomba anao hahita ny tsara fanahy. Mba hanampiana antsika hahita ny saro-takarina»ny lehilahy tsara,»hoy aho nanontany Tokoa rangahy Isaka Huss mba hanome antsika vitsivitsy sahaza avy amin’ny fomba fijery ny lehilahy. Amin’ny iray malaza afa-tsy, tsy misy, tena tsy misy ratsy toerana mba hitsena ny olona tsara. Raha ny marina, ny sasany ny tena (toa) hampadio ny toerana ihany koa ny toerana tsara indrindra: ny fivarotana, ny fivarotana kafe, ny trano famakiam-boky, ny anarany izany. Ny tena raiki-pohy ho an’ny fahombiazana. Mahita lehilahy iray tianao, ho masony, tsiky, ary, angamba ny zava-dehibe indrindra, ny hifantoka amin’ny fomba izay manasa ny resaka (tsy fantatro hoe impiry aho no efa sprint rehefa ny tovovavy satria izy no famandrihana azy io ny fiara). Fantatro, fantatro, dia tahaka ny fiteny, ary mety tsy dia ho ara-pivavahana ho an’ny rehetra fantatro, fa tsy ny teboka. Ny toeram-pivavahana, ary noho ny antony mitovy, ny fampakaram-bady dia toy ny toerana mba hitsena ny olona noho ny antony roa lehibe. Voalohany, ao amin’ny fiangonana, be toy ny any fampakaram-bady, isika voahodidin’ny olona hafa izay efa manambady miaraka amin’ny ankizy, ary izany no mahatonga antsika te-hijanona amin’ny maha-tena iray. Betsaka araka izay mety hankafy ny perks ny bachelorhood, rehefa ny lehilahy no mandeha any an-toerana ny fanompoam-pivavahana rehetra amin’ny tenany, fa mampahatsiahy azy ny fomba be izy dia toy ny olona tsy misy afa-tsy izy, ary ianao dia hahazo ny saina raha ianao no tsy eo ihany koa. Dia eny tsara ianao dia mino aho mahita ny vehivavy rehetra eo ambanin’ny efa-polo ao amin’ny fiangonana tamin’ny farany ny toriteny, ary tsy izaho iray ihany. Miezaka mipetraka any amin’ny toerana hita maso izay misy toerana ho an’ny lehilahy iray mipetraka eo akaikin’ny na ny akaiky anao. Raha ny marina, fantatro fa vehivavy izay efa nanao izany ny fitsipika mipetraka manaraka ny voalohany lehilahy iray hitan’izy ireo, ary tsy mananihany aho, dia hanao izay lehilahy ny andro. Ary izay tsy mampihatra fotsiny ny fiangonana: manandrana izany amin’ny fiaramanidina, ny fiara fitaterana, ny trano famakiam-boky, trano fisakafoanana miaraka amin’ny kaominina latabatra, na rindran-kira ihany koa. Faharoa, misy zavatra iray mikasika ny fiangonana sy ny fampakaram-bady lanonana izay na dia tanteraka ny vahiny manana ny heviny ny mahazatra ny azy ireo. Ohatra, tao amin’ny fampakaram-bady fantatrao na iza na iza ao amin’ny fampakaram-bady dia tsy maintsy mahalala ny ampakarina, ary na ny mpampakatra amin’ny lafiny sasany sy any am-piangonana ianao fantany ity olona ity dia ampahany amin’ny fiaraha-monina izay mizara mahazatra ny finoany. Izany dia midika hoe ny vehivavy dia mety hahita ny lehilahy toy ny mahazatra kokoa, ary izay raha ny marina dia tena manampy antsika hatoky manatona azy. Minoa ahy, isika rehetra koa efa zatra ny hatsiaka soroka fa ny vehivavy hanome eny, rehefa ry zareo rehefa nanatona ny olon-kafa, ary mety hisy fiantraikany amin’ny fahavononana hanatona na dia ry zareo manome antsika ny famantarana. Ny maha-ao amin’ny mahazatra ity, raha toa ianao, dia manampy amin’io lafiny io.
Tena toy ny dihy
Aho lehibe. Indraindray na dia tsy afaka hanampy ny tenako, na aiza na aiza aho. Fa raha ianao tsy mahafantatra, maro ry zalahy tsy afaka na tsy mandihy. Ary noho izany indrindra ry zalahy tsy mahita amin’ny maizina, mafy, sy ny bibidia boîte de nuit no misy ny fijerena sy na mitoto amin’ny vehivavy, na manana tombontsoa ao amin’ny fifandraisana miaraka amin’izy ireo na tsia. Ny olana dia tsy ny hoe tsy misy na inona na inona mendrika ry zalahy ao amin’ny ireo toerana ireo, fa tsy misy mahalala fomba. Tsy toy ny hoe raha ny marina dia afaka manana-dresaka, taorian’ny rehetra. Raha toa ianao ka manantena ny hihaona amin’ny lehilahy amin’ny zoma alina, dia ny maizina efi-trano, ny mozika mafy, sy ny rehetra ihany koa-matetika ny hena tsena vibe ny boîte de nuit tsy homeko anao tena tsara ny mifanohitra. Fa tsy, raha te-dihy sy ny hihaona ry zalahy izay raha ny marina dia mba te hiresaka aminao, mamela ahy mba hilaza aminao ny mahita ny fisotroana izay mitendry mozika mivantana. Ny cover-poana dia manampy mba hitandrina ny ankamaroan ‘ny weirdos avy, ny mozika matetika manomboka ny teo aloha teo amin’ ny alina, ary ny jiro sy ny feo haavon’ny dia matetika kokoa ny sahaza ny tena raha nahita sy nandre ny olona hafa. Maro amintsika no mandany ny tsara dia kely ny fotoana sy ny vola teo am-ponja mifanerasera sy manantena ny hihaona olona iray manokana. Fa ny fotoana dia ho efa ho fandaniana avy amin’ny ora sambatra miaraka amin’ny sipa mety ho fanampiny mamokatra raha kely kokoa iniana momba ny eo an-toerana manondraka lavaka. Voalohany, na dia ianao tsy mba sarotiny ny karazana, mahita ny toerana izay mametraka ny fotoana, nihevitra, sy ny ezaka ho ny fananganana satria izany ianao izay matetika mahita misaina, miasa mafy ny olona izay manome lanja ny fotoana. Faharoa, mipetraka ao amin’ny bar, raha afaka ianao. Ny fisotroana dia mazava ho azy fa ny hevitra ny hifantoka amin’ny an-trano, fa ny zava-dehibe kokoa, mora hatonina kokoa noho ny olona iray latabatra. Na dia ny sahisahy indrindra ny olona dia hiato kely aloha manakaiky ny vehivavy iray nipetraka teo amin’ny latabatra ny fahasarotan’ny dia mideza, ary ny mety ho tsy fahombiazana dia eny amin’ny tabilao. Ny lehilahy dia tsy mihevitra ny hipetraka ao misokatra seza amin’ny vehivavy ny latabatra, ka dia izy no sisa, na miaraka amin ny azy (sy ny namany), na mamitsaka teo amin’ny tany. Matokia ahy, fa ny fahoriana mafy. Fa raha toa ka ianao ao amin’ny bar. Ny olona iray dia tsy maintsy nita ny fisakafoana fizarana, ianao efa amin’ny maso-ambaratonga, ary tsy tokony tsy ho izay misokatra amin’ny toerana mba manana voajanahary resaka. Ary raha tianao ny manasa ny olona ny hanatona anareo. Hanokatra ny fihetsika kely ho tonga soa ny resaka. Farany, raha toa ianao tsy tapaka any ho any, hanorina ny rapport amin’ny bartender, ary lazao azy tadiavinao mba hihaona olona iray fa tsy hoe na iza na iza. Ny ry zalahy sy ny gals ao ambadiky ny fisotroana mahita ny rehetra ary afaka ny ho loharano tsy nampoizina ny intel momba ny mety suitors. Dia ho afaka manoro anao ny lalana marina, ary na dia ny hanampy hitondra lavitra ireo izay tsy mendrika ny famaritana
← Dia Mampiaraka Ny Vehivavy Arabo Online Nightlife Diary
Mianatra ny teny arabo ho maimaim-Poana amin'ny Aterineto →